ဝိမုတ္တိသုခ (The Bliss Of Emancipation): March 2009
အရှင်မဟာကဿပမထေရ်နှင့် ဘဒ္ဒါကာပိလာနီထေရီမကြီးတို့ အကြောင်းလေးပါ။ အတိတ်သံသရာဘ၀မှာ ဆုတောင်းကောင်းခဲ့ကြပုံလေးကို ဖတ်ကြည့်မိပြီး အားကျမိလို့ ပါ ခင်ဗျား။
(ဒီ ebook ကို ဘုန်းဘုန်း ဦးလောကနာထ (http://www.lknt.org) က ကျေးဇူးပြုပါတယ်ခင်ဗျား။)
Posted by The Bliss Of Emancipation at 4:03 PM 1 comments Links to this post
Posted by The Bliss Of Emancipation at 5:03 PM0comments Links to this post
Labels: Mahasi Sayardaw, ဗောဇ္ဈင်(၇)ပါး
The master jumped up, grabbed him by the scruff of his neck, dragged him into the river, and plunged his head under water. After holding him there foraminute, with him kicking and struggling to free himself, the master finally pulled him up out of the river. The young man coughed up water and gasped to get his breath. When he eventually quieted down, the master spoke. "Tell me, what did you want most of all when you were under water?"
(ဒီပုံပြင်လေးက ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းတုန်းက ညီလေးဖိုးသား-ကိုပြည့်စုံအောင် -အဖြူရောင်မေတ္တာ (http://sonesiyar.blogspot.com) ကို ပြောပြဖြစ်ခဲ့တဲ့ ပုံပြင်လေးပါ။ သူ့ ကို ပြောတုန်းကတော့ ဗမာမှုပြုပြီး "God" အစား "တရား" လို့ ပြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်။ အခုကတော့ Original Version ပါခင်ဗျား။)
Posted by The Bliss Of Emancipation at 4:26 PM0comments Links to this post
Posted by The Bliss Of Emancipation at 4:44 PM0comments Links to this post
ဒါရသင်္ဂဟ။ ။ မယားကိုချီးမြှောက်ခြင်းဟူသည်မှာ လင့်ဝတ်တရား ကျေပွန်ခြင်းကို ဆို၏။ လင့်ဝတ်တရားများကား မြတ်နိုးခြင်း၊ မထီမဲ့မြင်မပြုခြင်း၊ မိန်းမတပါး မလိုက်စားခြင်း၊ စည်းစိမ်အစိုးရမှု အပ်နှင်းခြင်း၊ ၀တ်စားတန်းစာ ပေးခြင်းအားဖြင့် ငါးပါးတို့ တည်း။
ထိုတွင် မြတ်နိုးခြင်းဟူသည် ချစ်ဖွယ်စကားဖြင့် မြှောက်စားပြောဆိုခြင်းတည်း။ မထီမဲ့မြင်ပြုခြင်းဟူသည်မှာ ကဲ့ရဲ့ရှုတ်ချခြင်း၊ မောင်းမဲခြင်းစသော အမှုမပြုခြင်းပင်။ စည်းစိမ်အစိုးရမှု အပ်နှင်းခြင်းမှာ စီမံရန် အိမ်တာဝန်အားလုံး လွှဲအပ်ခြင်းတည်း။ လယ်လုပ်ခြင်း၊ ကုန်သွယ်ခြင်းစသော တာဝန်မှာ ယောင်္ကျား၏တာဝန်ဖြစ်၍ ထိုမှဖြစ်လာသော ပစ္စည်းကို လုံခြုံအောင်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရန်နှင့် အိမ်၌စီမံရန် တာဝန်မှာ မိန်းမတာဝန်ဟု ရှေးကအစဉ်အလာရှိ၏။ ၀တ်စားတန်းစာပေးခြင်းမှာ မိမိအခြေအနေအလိုက် ပေးကမ်းခြင်းကိုဆိုသည်။
၀တ်တရားနှင့်အညီ မယားအား ချီးမြှောက်တတ်သော လင်ယောင်္ကျားကောင်းတစ်ယောက် ရနေသောမယားကလည်း မိမိဝတ္တရားများ မလစ်ဟင်းစေခြင်းဖြင့် တုံ့ ပြန်မှ မယားကောင်းတစ်ယောက် ဖြစ်နိုင်သည်။ မယားဝတ်များကား အိမ်တွင်းအလုပ်များကို ကောင်းစွာလုပ်ခြင်း၊ ဆွေမျိုးများအား ချီးမြှောက်ခြင်း၊ မိမိလင်ယောင်္ကျားမှတပါး အခြားယောင်္ကျားနှင့် မကျူးလွန်ခြင်း၊ ပစ္စည်းဥစ္စာကို ကောင်းစွာထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်ခြင်း၊ ချက်ရေးပြုတ်ရေးစသည်၌ ကျွမ်းကျင်၍ မပျင်းမရိခြင်းအားဖြင့် ငါးပါးတည်း။
အတွဲလေးမျိုး။ ။ ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦး ၀တ်တရားကျေပွန်၍ ကိုယ်ကျင့်သီလပြည့်စုံကြလျင် သူတို့ ၏အိမ်မှာ အမြဲတမ်းသာယာ၍ ကျက်သရေရှိသော “သီရိဂေဟာ” ဖြစ်လျက်ရှိတော့သည်။ ဤသို့ သောဇနီးမောင်နှံလည်း နတ်သားနှင့်နတ်သမီး စုံဖက်ထားသော အတွဲဟု ဆိုရသည်။ စတုကင်္ဂုတ္တရ ဒုတိယပဏ္ဏာသက ပုညာဘိသန္ဒ၀ဂ် (၃၆၈)၌ ဇနီးမောင်နှံ အတွဲလေးစုံကို ဟောတော်မူ၏။ ထိုအတွဲများကား-
(၁) သူသေယောင်္ကျားနှင့် သူသေမိန်းမ = လင်ကလည်းအကျင့်မကောင်း၊ မယားကလည်း အကျင့်မရှိသော အတွဲ။ ဂုဏ်မတိုးတက် သေလျက်ရှိသောကြောင့် သူသေဟုဆိုရသည်။
(၂) သူသေယောင်္ကျားနှင့် မယားနတ်သမီး = လင်က သီလမရှိ၊ မယားကသီလရှိသော အတွဲ။
(၃) နတ်ယောင်္ကျားနှင့် မယားသူသေ = လင်ကသီလရှိ၍ မယားကသီလမရှိသော အတွဲ။
(၄) နတ်ယောင်္ကျားနှင့် မယားနတ်သမီး = နှစ်ဦးစလုံးသီလရှိကြသောအတွဲ။
(သပြေကန်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ ပရိတ်ကြီးနိဿယသစ် စာမျက်နှာ ၁၁၆-၁၁၇ မှ ကူးယူဖော်ပြပါသည်။)
Posted by The Bliss Of Emancipation at 1:58 AM0comments Links to this post
‘ဗောဇ္ဈင်’ဆိုတာ ‘ဗောဇ္ဈင်င်္ဂ’ ဆိုတဲ့ ပါဠိမှ ဆင်းသက်လာတဲ့ ဝေါဟာရပဲ။
‘ဗောဇ္ဈင်င်္ဂ’ဆိုတာလည်း ‘ဗောဓိ’နဲ့ ‘အင်္ဂ’နှစ်ပုဒ်ကို ပါဠိနည်းအရ စပ်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
‘ဗောဓိ’မှာ ‘နိုးမှု’ ‘သိမှု’ အနက်နှစ်မျိုးနဲ့ ဆိုင်ပါတယ်။
အရိယာဖြစ်တဲ့ ဘုရားတပည့်ဟာ လောကုတ္တရာမဂ်ခဏမှာ သတိ၊ ဓမ္မဝိစယ၊ ဝီရိယ၊ ပီတိ၊ ပဿဒ္ဓိ၊ သမာဓိ၊ ဥပေက္ခာ တရားခုနစ်ခု အစုအပေါင်းဖြင့် ကိလေသာအစဉ်ဟူသော အိပ်ပျော်ခြင်းမှ နိုးလာတတ်တယ်။
နိဗ္ဗာန်ကို ကိုယ်တွေ့ အသိရောက် မျက်မှောက်ပြုတတ်တယ်။
ဒီတော့ သတိစသော တရားခုနစ်ပါး အပေါင်းဟာ ကိလေသာဆိုတဲ့ အိပ်ပျော်ခြင်းမှ နိုးကြောင်း၊ သစ္စာသိကြောင်း၊ နိဗ္ဗာန်ကို ကိုယ်တွေ့သိကြောင်း တရားအစုဖြစ်လို့ ထိုတရား အစုအပေါင်းကို ‘ဗောဓိ’ ဆိုရပါတယ်။
‘သတိ’စသော တရားတခုခုကိုတော့ ထို‘ဗောဓိ’ခေါ်တဲ့ တရားအပေါင်း၏ အစိတ် ‘အင်္ဂ’ ဆိုရပါတယ်။
ဒါကြောင့် သတိစသော တရားတခုစီကို ‘ဗောဓိအင်္ဂ’၊ ဗောဓိခေါ် တရားအစုအဝေး၏ အစိတ်အင်္ဂါ - ဗောဇ္ဈင်င်္ဂလို့ ဆိုရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဈာနင်္ဂ - ဈာနင်၊ မဂ္ဂင်္ဂ - မဂ္ဂင် ဆိုတဲ့ အမည်များလိုပါပဲ။
ဝိတက်၊ ဝိစာရ၊ ပီတိ၊ သုခ၊ ဧကဂ္ဂတာ တရားငါးပါးအပေါင်းကို ဈာန-ဈာန်လို့ ဆိုရပြီး၊ ထိုဈာနမည်တဲ့ တရားထဲက ဝိတက်စသော တခုတခုစီကိုတော့ ဈာနအင်္ဂ - ဈာန်၏အစိတ် ဈာနင်ဆိုရသလိုပါပဲ။
သမ္မာဒိဋ္ဌိစသော တရားရှစ်ပါးအပေါင်းကို မဂ္ဂ - မဂ် ဆိုရပြီး၊ ထိုအပေါင်းမဂ်တွင် ပါဝင်သော သမ္မာဒိဋ္ဌိစသော တရားတခုစီ တခုစီကိုတော့ မဂ္ဂအင်္ဂ - မဂ်၏အစိတ်အပိုင်း မဂ္ဂင် ဆိုရပါတယ်။
ဒီတော့ ဗောဓိနဲ့ ဗောဇ္ဈင်င်္ဂဟာ အပေါင်းနဲ့ အစိတ်အဖြစ်ဖြင့် ကွဲပြားကြတယ်။
သတိစသော တရားအပေါင်းနဲ့ အစိတ်သာ ဖြစ်ကြတယ်။
တနည်းအားဖြင့် သစ္စာကို သိတတ်သောကြောင့် အရိယာဖြစ်တဲ့ ဘုရားတပည့်ကို ‘ဗောဓိ’ ဆိုရပါတယ်။
အရိယာ ဘုရားတပည့် သစ္စာသိတာ နောက်ကပြောခဲ့တဲ့ သတိစသော ခုနစ်ပါးအပေါင်းနဲ့ သိတာပါပဲ။
ဒါကြောင့် ဒီတရားအပေါင်းနဲ့ အရိယာသာဝကဟာ မကွဲမပြား တခုတည်းပါပဲ။
ဒါကြောင့်ပဲ ‘ဗောဓိ’ဆိုရတဲ့ အရိယာဘုရားတပည့်၏ အစိတ်အင်္ဂါလို့လည်း ဆိုရပါတယ်။
ဒါက ပညတ်အားဖြင့် ဗောဇ္ဈင်ဆိုရတဲ့နည်းပေါ့။
သေနင်္ဂ - စစ်တပ်အင်္ဂါ၊ ရထင်္ဂ - ရထားအင်္ဂါ အစိတ်အပိုင်း ဆိုတာလိုပါပဲ။
ဆင် မြင်း ရထား ခြေသည် အရာဝတ္ထုလေးခုအပေါင်းကို သေနာ - စစ်တပ် ခေါ်တယ်။
တကယ်တော့ ဆင် မြင်း ရထား ခြေသည် ဝတ္ထုသာ အရှိ။ စစ်တပ်ဆိုတာက ထိုလေးခုအပေါင်းကို အစွဲပြု ခေါ်ရတဲ့ အခေါ်ဝေါဟာရ ပညတ်သာ။
ဒီ ပညတ်ကလည်း သမ္မုတိအရ အရှိပဲမို့ စစ်တပ်လို့ပဲ ဆိုရပါတယ်။
အဲဒီ စစ်တပ်ရဲ့ အစိတ် ဆင် မြင်း စသည်ကိုတော့ သေနင်္ဂ - စစ်တပ်ရဲ့ အစိတ်အင်္ဂါ ဆိုပါတယ်။
ဒါလိုပဲ ဘီး ဝင်ရိုး စသော အစိတ်အပိုင်းတွေ စုပေါင်းမိတဲ့အခါ ‘ရထား’ဆိုတဲ့ ဝေါဟာရ ဖြစ်လာရတယ်။
တကယ်တော့ ဘီး ဝင်ရိုးစသော အစိတ်ဝတ္ထုသာ။ တကယ်အရှိ ‘ရထား’ဆိုတာက အမည်ဝေါဟာရ ပညတ်မျှပဲ။
သို့သော်လည်း ဝေါဟာရဟာ လောကသမ္မုတိ လူအများရဲ့ သမုတ်ချက်အရ အရှိပဲ။
ဒါကြောင့် ဘီး ဝင်ရိုး စသော အစိတ်အပိုင်းတွေ စုမိတဲ့အခါ ‘ရထား’ဆိုရပြီး၊ အစိတ်အစိတ် ဘီး ဝင်ရိုး စသည်ကိုတော့ ရထင်္ဂ - ရထား၏ အစိတ်အင်္ဂါ ဆိုရပါတယ်။
အဲဒါလိုပဲ အရိယာ ဘုရားတပည့်ဟာ ဒီတရားအပေါင်းနဲ့ သစ္စာသိတယ်။
အရိယာသာဝကဟာ တကယ်အရှိတော့ မဟုတ်ဘူး။
အဝိဇ္ဇမာန ပညတ်ခေါ်၊ ပရမတ္ထအားဖြင့် ထင်ရှားမရှိတဲ့ ပညတ်ပါပဲ။
ဒီတရားအပေါင်း အစွဲပြု ပညတ်ထားတာဖြစ်တော့ တရားအပေါင်းရဲ့ အစိတ်ဟာ ပုဂ္ဂိုလ်၏ အစိတ်လို့လည်း ဆိုနိုင်ပါတော့တယ်။
ဒါကြောင့် ယခင် ပထမနည်းအရ သစ္စာသိကြောင်း သတိစသော တရားအပေါင်း၏ အစိတ်အပိုင်းဟုလည်းကောင်း၊ ယခုနည်းအရ သစ္စာမြင်သိ အရိယာသာဝက၏ အင်္ဂါ အစိတ်အပိုင်းဟုလည်းကောင်း ဗောဇ္ဈင်၏အနက်ကို သိရပါတယ်။
ဒါက အဋ္ဌကထာလာနည်းများ ဖြစ်ပါတယ်။
ရဟန်းတပါးက “မြတ်စွာဘုရား ဗောဇ္ဈင်တွေ ဗောဇ္ဈင်တွေလို့ ဆိုကြပါတယ်၊ ဘယ်မျှလောက်သော အကြောင်းဖြင့် ဗောဇ္ဈင်တွေလို့ ဆိုအပ်ပါသလဲ”၊ ဤသို့လျှောက်ထားတဲ့အခါ -
“ဗောဓာယ သံဝတ္တန္တိ ခေါ ဘိက္ခု တသ္မာ ဗောဇ္ဈင်္ဂါတိ ဝုစ္စန္တိ”
ရဟန်း နိဗ္ဗာန်ကို သိခြင်းငှာ ဖြစ်ကြသောကြောင့် ဗောဇ္ဈင်တရားများဟု ဆိုရတယ်လို့ ဘုရားရှင်က ဖြေကြားတော်မူခဲ့တယ်။
ဒီ ဘုရားရှင် မိန့်ခွန်းတော်အရဆိုလျှင် ဗောဓိ - နိဗ္ဗာန်ကို သိခြင်း၏၊ အင်္ဂ - အကြောင်း၊ ဗောဇ္ဈင်င်္ဂ - နိဗ္ဗာန်ကို သိခြင်းအကြောင်းလို့ ဗောဇ္ဈင်အနက်ရလာပါတယ်။
ဒီအနက်က အမှတ်ရ လွယ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် နိဗ္ဗာန်ကို သိခြင်းအကြောင်းဖြစ်တဲ့ သတိစသော တရားများကို ဗောဇ္ဈင်လို့ ခေါ်ရကြောင်း ဒီပါဠိအရ မှတ်သားဖို့ပါပဲ။
(အဘိဓဇမဟာရဋ္ဌဂုရု၊ ရွှေကျင်နိကာယဥပဥက္ကဌ၊ ကျမ်းပြုအကျော်၊ သပြေကန်ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တဝါသေဋ္ဌာဘိဝံသ ၏ “ဗောဇ္ဈင်ခုနစ်ပါး တရားမြတ်ရတနာ”၊ ဒုတိယအကြိမ်နှိပ်-၂၀၀၅၊ စာ ၃၇-၄၀)
Tha Pyay Kan Sayadaw _7Baw Zin
Posted by The Bliss Of Emancipation at 4:17 PM0comments Links to this post
Labels: Dhamma Ebooks, Thapyaekan Sayardaw, ဗောဇ္ဈင်(၇)ပါး
Posted by The Bliss Of Emancipation at 5:45 PM2comments Links to this post
Posted by The Bliss Of Emancipation at 3:39 AM0comments Links to this post
Posted by The Bliss Of Emancipation at 3:05 PM0comments Links to this post
(Original article from http://www.enabling.org/ia/vipassana/Archive/K/Kyi/meditationSacraficeKyi.html )
Posted by The Bliss Of Emancipation at 3:50 PM0comments Links to this post
Labels: Daw Aung San Suu Kyi, Dhamma Articles
ဒီနေ့တပေါင်းလပြည့်နေ့ဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ အတွက် ဘာသာရေးနေ့ ထူးနေ့ မြတ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ မြတ်စွာဘုရားရှင်၏ ပြည်တော်ဝင်အခါတော်နေ့ လို့ လည်း သတ်မှတ်ထားကြပါတယ်။
ရန်ကုန်မှာဆိုရင်တော့ ရွှေတိဂုံစေတီတော်ကြီးရဲ့ဗုဒ္ဓပူဇနိယပွဲတော်နေ့ ဖြစ်ပါတယ်။
လပြည့်နေ့ အခါသာမယမှာ သတ္တ၀ါတွေ အားလုံး စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း၊ ကိုယ်၏ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြ၍ ဓမ္မ၏ အေးငြိမ်း စစ်မှန် ချမ်းသာသော အဆုံးတိုင်လွတ်မြောက်မှုပန်းတိုင်ကို လွယ်ကူ လျင်မြန် သက်သာသော နည်းကောင်းလမ်းမြတ်ဖြင့် သိမြင်ရောက်ရှိ နိုင်ကြပါစေကြောင်း မေတ္တာပို့ သ ဆုမွန်ကောင်း တောင်းအပ်ပါသည် ခင်ဗျား။
စာဖတ်သူဓမ္မမိတ်ဆွေအပေါင်းအား တပေါင်းလပြည့်နေ့ အမှတ်တရ အဖြစ် ဓမ္မပဒ၊ မဂ္ဂ၀ဂ္ဂ မှ ကျွန်တော်အလွန်နှစ်သက်သော ဂါထာ (၃) ပုဒ်ကို ဓမ္မလက်ဆောင်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျား။
၂၇၇။ "သဗ္ဗေ သင်္ခါရာ အနိစ္စာ" တိ၊ ယဒါ ပညာယ ပဿတိ။
အထနိဗ္ဗိန္ဒတိ ဒုက္ခေ၊ ဧသ မဂ္ဂေါ ဝိသုဒ္ဓိယာ။
၂၇၈။ "သဗ္ဗေ သင်္ခါရာ ဒုက္ခာ" တိ၊ ယဒါ ပညာယ ပဿတိ။
၂၇၉။ "သဗ္ဗေ ဓမ္မာ အနတ္တာ" တိ၊ ယဒါ ပညာယ ပဿတိ။
Posted by The Bliss Of Emancipation at 2:33 PM0comments Links to this post
Posted by The Bliss Of Emancipation at 7:40 PM3comments Links to this post
Posted by The Bliss Of Emancipation at 3:00 AM0comments Links to this post
Posted by The Bliss Of Emancipation at 2:20 AM0comments Links to this post
Posted by The Bliss Of Emancipation at 3:15 AM0comments Links to this post
Posted by The Bliss Of Emancipation at 3:08 AM0comments Links to this post
There are5Jhanas in that 'A Lin Ka Thine' or 'light kasina'.
Choosearoom of average space. Close all windows and doors. Make sure there is enough air circulating the room. And average temperature is also needed not to be distracted. The room should be dark. And initial step should be practised at night. So that darkness is sure.
Then createalight spot of2feet size. There may be rim of light around the margin and it is not very important. The distinction is that between the centre of the spot and outside of the spot are completely different. That is total darkness and brilliant light spot.
Before the practise make yourself sure that you do not have any attachment to anything. That is all your personal matter should be put aside. Make clean your body. Haveanice bath. Cut nails and hair and mouthstache, beard etc. Make sure you do not have sexual desire at leastaday before. When you do not have any small distraction (like I haveaduty to call my children etc etc).
Your aim is that you have to clean all your mind. This means that your mind at any time is cleaned. Clean means 'free of akusala' or unwholesome thoughts and actions. This is the main aim of Jhana. Take 8 special precepts. This 8 special precepts is not 8-Par-Thi-La. This 8 special precepts for Jhana is
3. free of sex thoughts (not kamesumicchaacara only)
4. not telling lie
5. not telling harsh speech
6. not telling divisive speech
7. not telling non-sense story
8. living on right livelihood
As soon as you have done all these, you are ready to start the Jhana Journey.
Prepare 'The Circle of Light Spot' as I said above.
Sit inaposition which suits you to sit foralong time say at least 1 hour without any movement. Otherwise there will be distractions.
You have not to be too close to the light spot. And equally you have not to be too far from the light spot. You should be (your eyes) should be2feet away from the right centre of the light spot.
Put the mind right at the centre with un-closing eyes. There may be many thoughts. Do not worry at earlier stages. Just pass them. Eyes may become fatigue. But try it. Look at all the details of the light spot.
Think or put your mind on the light spot only. Your mind will be wandering around the light spot. If this happen it is good. Otherwise try to put the mind to the light spot again and again.
The reason to be not too far and not too near is that to prevent distraction.
Posted by The Bliss Of Emancipation at 3:28 PM0comments Links to this post
Labels: Dhamma Articles, Light Kasina Meditation, စိတ်ကူးပုံရိပ် စာစုများ
Posted by The Bliss Of Emancipation at 2:50 PM0comments Links to this post